ikhaya » iindaba » I-Axon Ukubonisa i-IP Live Interoperability kwi-IBC
I-Axon Ukubonisa i-IP Live Interoperability kwi-IBC
Ukufudukela kwi-IP ekusasazeni kugcina abathengi kunye nabathengisi kwishishini lethu elihlala kuyo. Nangona i-IP iyenzeka ngokwenene, kusekho izithintelo ezininzi zokunqoba, kungekudala ukutshintsha okungahambi ngokukhawuleza, ukulawulwa kwenethiwekhi kunye nokulawulwa kwe-IP kunye nokubeka iliso. I-Axon Digital Design, ukubhiyozela iminyaka eyi-30 ekhonza imboni yokusasazwa, iya kubonisa i-IP workflows engasebenzisanayo ejongene nale mingeni kwi-stand yayo kwi-IBC2017 (10.A21). Abahlobo ababandakanyekileyo baquka i-Arista, i-SDN, i-sonoVTS, i-Embrionix, i-Meinberg kunye I-Utah yeSayensi.
Ukuguquka kweP IP kwisenzo
I-Axon ibonise ukuma kwayo ngendlela enokubambisana nokusebenzisana kwe-IP phakathi kwabathengisi abaninzi kwiimeko eziqhelekileyo zokuvelisa. I-Arista ye-IP iyatshintsha (7050SX2-128 kunye ne-2x 7050SX-72Q) inikezela i-IP backbone kwi-demo ebukhoma. Esinye sitshintshi sisebenza njengomgudu; Amanye amabini amaqabunga. Oku kunceda amaqabunga amaqabunga / amaqabunga kunye namaqabunga amaqabunga / amagqabi / amaqabunga amaphepha.
Ngokusebenzisa isofthiwe ye-GRN ye-GRID, i-Axon iya kubonisa ukuguqulwa kwevidiyo ye-IP ngokugqithiseleyo kunye ne-salvo ishintshi ngekhwalithi eqinisekileyo yenkonzo. Inethiwekhi ye-IP ye-Arista yeqabunga yecala ilawulwa ngamandla yi-SDNsquare GRID kwaye yanyuka ngaphezu kwe-80 HD imithombo yevidiyo.
I-Hybrid Ethernet-SDI ibonisa
Abavakatye kwi-Axon's booth bayakukwazi ukubona i-demo ephilayo ye-Ethernet-SDI. Imithombo ye-SDI iya kuguqulwa kwi-IP nge-module ye-Axon Synapse NIO440, i-bridge 8-e-direction e-Ethernet / SDI kwibhanti, ukusuka kwi-3G /HD-SDI ukuhamba kwevidiyo ye-Ethernet engaxinzekanga ngeendlela eziqhelekileyo okanye nge-embrionix 'SFP SDI kwiiprogram ze IP. Ukugxilwa kwipropati ye-IP ngu I-Utah yeSayensi Uchungechunge lwe-2 router evelisa iifayile ze-IP kunye nemizila ehambayo kwi-sonoVTS i-hd2Line Pro Series Series ye-IP-display.
Inxalenye yale mimo ye-IP yombandlululo yi-Axon SynView IP yokubukela i-IP efumana iifayile ze-IP kwi-backbone yase-Arista. I-SynView i-SDI yokubukela i-SDI iphinde ifakwe kwaye ifumana ingeniso ye-SDI evela kwi-NIO440 eguqula umtshini we-IP kwi-SDI. Yonke inkqubo ifumana ixesha elivela kwi-Meinberg LANTIME M1000 nge-Procision Timing Protocol (PTP). I-PTP ivumela ukuvumelanisa ngokuchanekileyo kumanethiwekhi njengomzekelo we-Ethernet. Ngokusebenzisa iitampu zedatha ezivelisiweyo kwiipakethi zedatha ukuchaneka kwinqanaba le-nanosecond liyakwenziwa.
Ulawulo lwe-IP kunye noLawulo lweNethiwekhi
Ingxenye ebalulekileyo kwiindawo zokusasazwa ze-IP kwanamhlanje zilawulo kunye nokubeka esweni isiseko se-IP. Kwintliziyo ye-IBC IP yokusebenzisana, i-Axon's Cerebrum isetyenziselwa ukunika i-NMOS IS-04 / 05 Ukufumanisa, ukuBhaliswa kunye neenkqubo zokulawula ezifunekayo ukulawula inkqubo yokuhambisa i-IP kwi-Cerebrum. Izinketho zexesha elizayo kwiCerebrum ziya kunceda ukucwangciswa okulula kunye nokusetha, ulawulo kunye nokulawula ukutshintsha kwenethwekhi esetyenziswe kwinkqubo, ukubonelela nge-Advanced Advanced Monitoring yokusebenza komnatha kunye nokunika ukulungelelaniswa okuzenzekelayo kwezixhobo ze-IP eziziwayo nokutshintsha iziseko.
"Ngomnyaka u-Axon ubhiyozela iminyaka eyi-30 yenkonzo kwi-shishini lo sasazo," kusho i-CEO yaseJan Eveleens Axon. "Impumelelo yethu eqhubekayo isekelwe kwingqwalasela yethu ecacileyo kwimingeni yabathengi kwaye ihambisa izisombululo abazixhomekeke kuzo. Njengoko i-IP iya kuba yinyani, ukugqwesa kwe-Axon kwiziseko zokusasazwa kunye nolwazi oluqinileyo lwe-IT kunye nentsebenziswano kunye nabalingane abakhulu baya kunceda abo bahambayo kwi-IP banokuyitshabalalisa imiba yobuchwepheshe ephakama kwiindawo ezininzi zokuthengiswa kunye nokujongana neengxaki ezingenakukhunjulwa kunye nezenkcubeko. Sinovuyo ukuba sikwazi ukubonisa oku ku-IBC kwaye sincede abantu bavelele indlela yabo ekhethiweyo. "
I-Axon iphinda ithathe inxaxheba kwezinye iindlela zokusebenzisana kwe-IP kwi-IBC kude nendawo yayo. Ababhenkethi kwi-show baza kukwazi ukufumana i-SynView 4K IP yokubukela ngokubanzi kunye ne-Cerebrum NMOS IS-04 / i-05 amandla njengenxalenye ye-IP ye-AIMS yelizwe eliyinyaniso ye-IP kwi-Room E.106 kunye ne-NIO440 Ethernet-SDI ibhanti ibonakala kwisenzo isibonakaliso se-sonoVTS IP kwi-stand 8.B44
Arista I-Axon Digital Design Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Embrionix IBC 2017 IP engasebenziyo Meinberg SDN SoftAtHome, MStar, iCES2017 SonoVTS Inkundla ye-Ultra HD I-Utah yeSayensi Injini yeVidiyo	2017-09-12
Previous: OQONDILEYO, OWIDER, LIGHTER - LITEPANELS UKUKHULULELA IBHAR NEGEMINI
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso kuwe: "I-Axon Ukubonakalisa i-IP Live Interoperability kwi-IBC". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/axon-to-showcase-live-ip-interoperability-at-ibc/. Enkosi.